Fọdụrụ n'ezinụlọ Journey Site Electric Skateboard - Jomo Technology Co., Ltd
Ọ na-aga ebe ọ na-ewe ụfọdụ akwa ọhụrụ guzo n'ime electric skateboard ebe; nhọrọ dị ka regenerative braking na na-wheel Motors. The wireless anya akara nwere ike chere na nke a bit nke a na-adịghị ike larịị dị ka ọ mere nke-agha plastic na ọ na-ele pụtara ọnụ ala. Na-adịkarị, onye na-agba na ihe electric skateboard bụ na-ana na osisi ma ọ bụ na-amalite na-arụ ọrụ na okporo ụzọ na a na n'ime ime obodo management-eme ya na-achịkwa ma mezie ijeụkwụ. Ịkụda gị inupụ triga na-atụ na handheld anya. Na ndị dị otú ahụ ọnọdụ, naanị ihe a ga-okokụre bụ gaa na ọnọdụ na bụ makpurukwa ala na-egbochi gị ime ihe ọjọọ ọbụna kwesịrị ị na-ada. Gịnị na-eme n'elu ya ọbụna crazier na extra fun bụ eziokwu na o nwere ike na-aga Uphill na downhill enweghị a nsogbu, otú ị ga-enwe ike njem na ya n'ebe ọ bụla ị chọrọ. The elu KV, na kpu naelectric skateboard ga ụgbọala. The wheel a electric skateboard na-mere si roba nke ike-eji na ụdị ọ bụla nke chakoo.
Na a na-eto eto iche iche nke electric skateboards tout ha ijeụkwụ (ụfọdụ ga-eme omume ọma n'elu 20 kilomita kwa hour), ngwa ngwa osooso, a ọnụ ọgụgụ nke ịnya ụdịdị, na sturdiness mgbe etinye ha zuru paces ma ọ bụ iwere anya-n'okporo ámá. Ya mere ọ bụrụ na ị na-a-achọ onye na-emen naanị maka ndị kacha, mgbe ahụ, KOOWHEEL electric skateboards ga izute gị chọrọ. Ya mere, nọgide na-enwe ahụ n'uche, anyị na-ama n'ozuzu obi ụtọ na-ahụ mgbe Koowheel electric skateboard abụọ emana Kooboard enen elu si n'ebe. The mbụ electric skateboard mejuputa ọtụtụ ndị nche nchedo atụmatụ maka onye na-agba.
N'ezie, na breeki bụ a regenerative usoro na-efu batrị. Anyị na- electric skateboard geeks. Maka ọtụtụ iri nde ndị pedestrians, a skateboard bụ a fun na ezi uche nhọrọ agazu ogologo anya ngwa ngwa na na-na n'ebe nsogbu nke gridlocked okporo ụzọ ma ọ bụ mmadụ karịrị akarị na adighi ike njem ọha na eze. Ma, e nwere onye na isi ka ọ bụla downside, na nke ahụ bụ kpọmkwem ikpe nri ebe a. Mgbe ọ nọrọ nso awa 200 na-eme nnyocha ndị kasị dị irè ụdị na ụdị na ahịa, anyị zụtara n'elu 10 mbadamba na ahịa nri oge a na-enyocha ha akụkụ-na-n'akụkụ ịchọ pụta nke e-skateboard n'ezie ụkpụrụ nduzi ha niile! Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ a mma, China bụ ebe anya. Ebe mmemme bụ na ebe igbochi rịa nke na-emerụ inclines, na onye na-agba ga-aghọta ike a na osisi nwere ike inye ga-akwanyere ùgwù n'ihi na-echebe were. Otú ọ dị, ọ bụ ihe niile na oge a dị nnọọ mma plan iji nyochaa nwa afọ ụkpụrụ nduzi na ụkpụrụ banyere ịnyịnya gị osisi ma ọ bụrụ na ị na njem na ọ na-ekwe ka ọtụtụ ndị ọzọ oge maka nche ma ọ bụrụ na ị ga-eje na gị E-skateboard. Ọ na-ewe naanị iri anọ na ise nkeji na-eri na osisi na ngwa ngwa chaja.
Post oge: Feb-23-2018